IZITHETHE ZOMTSHATO WASEHAWAII ZIGQIBELELE UKUYA KWAKHO KUMTSHATO WAKHO - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Amasiko Omtshato AseHawaii Namasiko Obungazi Ngawo
Amasiko Omtshato AseHawaii Namasiko Obungazi Ngawo
Yongeza umnwe wenkcubeko ye-aloha kumtshato wakho. WENDY LAUREL
Ukuhlaziywa kwe-Mar 05, 2020
Ukuba ufumana Utshatile kwiiIihawai Islands Ngokuqinisekileyo awuthandi omnye nomnye, kodwa ubuhle kunye nenkcubeko yendawo ekuyiwa kuyo. Ukuba unethemba lokubandakanya Umtshato waseHawaii izithethe kumtshato wakho, sibonisene neengcali zokucwangcisa zaseHawaii malunga nazo zonke izithethe namasiko. Funda ukuze ubone i-10 yaseHawaii amasiko omtshato kunye namasiko onokuthi uwafake kumtshato wakho.
Ukuvuthelwa kophondo lwe-conch shell, okwabizwa ngokuba yi-Pū, lisiko lakudala laseHawaii elalisetyenziswa ngaphambili ukubhengeza ukufika kwamaphenyane, ukungena kwe-ali'i (izidwangube zaseHawaii), nokunxibelelana phakathi kweelali ezingabamelwane, Utshilo u-Mina Brightman, u-CEO we-Cherished eHawaii. 'Yimbonakalo yamandulo yaseHawaii eyenzelwe ukuba ijonge ekubalulekeni kwayo yonke into eyenzekayo, utshilo. 'Namhlanje, iPū isetyenziselwa ukubiza indibano, ukusikelela ikhaya kunye nokwazisa ngomtshato.'
Ukuhlala kunye ngaphambi komtshato
Abaphathiswa abaninzi bakhetha ukuvuthela iPū ekuqaleni komsitho njengendlela yokuzisa iindwendwe kwindawo yokubonisa. Nangona kunjalo, abanye bakhetha ukuyivuthela njengoko isibini sabelana ngolwango lwabo lokuqala lomtshato.
Umsitho waseHawaii ngokwesiko uqala ngengoma ebizwa ngokuba yi-'Oli Aloha '. Ngokuka Mfundisi uMark Kunrow, umfundisi waseHawaii (kunye nophumelele i-Knot Best yeMitshato), i-oli sisiculo esenzelwe ukuphakamisa nokulungiselela indawo okanye abantu ukuze basikelelwe okanye bamkelwe ngaphakathi. Le oli inika ilizwi lombuliso. kwiindwendwe nakwesi sibini, utshilo uWagner. Ngokuyinxenye, ithi, 'Kwakukho ukufunwa komntu othandekayo, ngoku ufumanekile. Nobabini ngoku nizakuba nye, utshilo uWagner. Iphela ngo 'Aloha' kunye no 'E komo mai,' okuthetha ukuba wamkelekile.
ILeis, okanye iintyatyambo zeentyatyambo, luphawu lothando, intlonipho kunye nomoya weAloha. USandra Wagner, umnini woSuku loMtshato lweMaui, uthi kuqhelekile ukuba umsitho ubandakanye esi sibini sitshintshiselana ngeleis njengophawu lothando lwazo. 'I-lei eyenziwe ngobuchule, eneentyatyambo ezikhethwe ngesandla kunye ne-twine, edityaniswe ngononophelo kunye nothando luphawu lothando lwakho kunye ne-Aloha omnye komnye, utshilo. 'Njengoko utshintshiselana ngale leisi, uya kuqala ukuluka i-lei yakho ebomini kunye nothando.' Esi sibini sihlala sibonelela omnye nomnye ngoncumo nangokuncamisa esidleleni somnye nomnye.
Abakhwenyana bahlala benxiba isithsaba samagqabi eposi aluhlaza (ngamanye amaxesha aneentyatyambo ezincinci ezimhlophe, ezibizwa ngokuba yipikake, zalukiwe). Kumsitho womtshato waseHawaii, umphathiswa wasekhaya, odla ngokubizwa ngokuba yi-kahuna pule okanye kahu (indoda engcwele yaseHawaii), wayeza kubopha izandla zala maqabane kunye ne-maile lei (ngakumbi emva koko). Oomolokazana bahlala benxiba imitya emininzi yepikake emhlophe nepinki emhlophe, enokudityaniswa nee-orchids okanye i-rosebuds. Umtshakazi unokunxiba entlokweni yeentyatyambo ze-haku kunye noluhlaza. Abanye abatshatileyo banika oomama babo i-lei, ngelixa kwimitshato emincinci, ngamanye amaxesha izibini zinika undwendwe ngalunye.
Iintsikelelo zentsimbi yaseHawaii zihlala zenzeka kuphela kwimitshato yolwandle, njengoko ifuna amanzi. Ngokweli siko, uWagner ucacisa ukuba omabini la makhonkco abekwe kwisitya seenkuni saseHawaii. Umtshakazi ke uphethe isitya ngelixa umyeni ephethe iqokobhe lokuzalisa elizaliswe ngamanzi olwandle. Umphathiswa uyayisikelela imisesane ngokuntywila igqabi emanzini anetyuwa kwiqokobhe lekhonco aze afefe ngaphezulu kwamakhonkco.
NgokukaKunrow, 'pili ā nai kealoha' iguqulela 'uthando olubophelelayo.' Ngokweli siko, umntu osebenzayo ubopha izandla zesibini nge-maile lei ngelixa ecula ioli ehamba nayo. I-maile lei esetyenzisiweyo yenziwe ngeediliya eziluhlaza ezimnyama ezijijelwe kunye. UBrightman uthi ngamanye amaxesha uhonjiswe ngepikake okanye i-orchid emhlophe. I-maile lei inokuba yenye yezona zinto zindala kakhulu kwaye ke ngoko ingene nzulu kwisithethe nakwintsingiselo yenkcubeko, utshilo. Iyaziwa njenge-lei yasebukhosini, kwaye ibonisa ukuzinikela okungapheliyo, umnqweno woxolo kunye nentlonipho. Wongeza ukuba eli siko linokuthi liqwalaselwe njengesiHawaii elingana nomsitho wesanti okanye umsitho wekhandlela.
UKunrow uxelele i-Knot ukuba oku kuguqulela 'ubuso ngobuso.' 'Le oli ibonisa ukuphela komsitho kwaye ngumthandazo wesibini ukuba sabelane nge-alha emtshatweni wabo kwaye siwonge umphefumlo esiwunikiweyo,' ucacisa uBrightman. NgeJunrow, 'iAlo' kuthetha 'umntu' kunye no 'Ha' kuthetha 'ukuphefumla.'
Nokuba ungowokuzalwa kunye nokuzala amaHawaii, okanye ukuba eli lixesha lokuqala ukutyelela ilizwe laseAloha, unokufuna ukwazi amanye amagama athandana kakhulu nolwimi. Yongeza ambalwa ala magama aseHawaii kwizimemo zakho okanye ukuthanda kwakho; kwaye ukuba unesibindi nyani, ziqhelanise ezimbalwa ukuzisebenzisa kwi thowusti yakho.
Umama wesuti yomtshato
Ukuxabisa, ukuthanda, okanye ukubonisa uthando: ho'oheno
Umculo waseHawaii uthandana kakhulu, owenza ukuba ulungele umtshato. Isigingci sesitshixo kunye ne-ukelele zizixhobo zengingqi ezenza umculo weziqithi udume. Unokuqesha iimvumi zalapha ekhaya, kwaye unokuqesha nabadanisi abaqeqeshiweyo be-hula ukutolika iingoma. Ingoma yomtshato yaseHawaii, eyenziwe yaziwa ngu-Elvis kwifilimu iBlue Hawaii ihlala idlalwa ngexesha lomsitho okanye umdaniso wokuqala ..
Kumtshato wesintu waseHawaii, oomolokazana banxiba ilokhwe ende emhlophe emhlophe. Ihamba kwimpepho yePacific, kwaye inobuhle bayo obukhethekileyo. I-haku lei, iringi yeentyatyambo zaseHawaii ezinuka kamnandi, inxitywe entloko.
Amagumbi anokunxiba ezimhlophe, nawo, ngohlobo lwehempe (kwicala elibalekayo, kunjalo) kunye neeblukhwe. Banokunxiba umbhinqo onemibala eqaqambileyo esinqeni sakhe, kunye neeleyile eziluhlaza ezijikeleze intamo yabo.
Ngenxa yempembelelo yenkcubeko yaseAsia kwiiHawaii Islands, ii-kimono zinokunxitywa nasemitshatweni. Nangona kunjalo, sikholelwa ekubeni kufuneka unxibe nantoni na oyifunayo kumtshato wakho-lusuku lwakho, emva kwako konke.
Ukutya kubaluleke kakhulu (ungakhankanyi okumnandi) indlela yokubandakanya inkcubeko kunye nesiko laseHawaii ngosuku lwakho lomtshato. I-poi, incam eyenziwe ngengcambu ye-taro, sisidlo esimnandi sendawo yakho iindwendwe zakho zinokonwabela. Ukuba ukhonza inyama, cinga ngeLaulau, indlela yokulungiselela inyama, kubandakanya intlanzi kunye nenkukhu, ngokuzisonga ngamagqabi. Ipoke idayisi yentlanzi eluhlaza enencasa yemifuno kunye nolwandle, kwaye i-kulolo yi-coconut pudding eneswekile emdaka kunye ne-taro flavour.
Ukujonga ukusondela elwandle, ayothusi into yokuba intlanzi entsha kunye nemveliso egqwesileyo yeziqithi zithatha indawo ephambili, zihonjiswe ziindidi ngeendidi zeencasa. Iimpembelelo zaseAsia naseIndo-Pacific ezinje ngeThai, iJapan, kunye nePolynesia zenze ukutya kwaseHawaii kwaba yinto ebangela umdla. I-Ahi, okanye ityhuna, ilungisiwe kwaye iqhekeziwe kwisame, ngelixa ezinye ukutya kwaselwandle kuphekwe kwi-bouillabaisse yaseHawaii (iisosi zeziqhamo ezintsha ezenziwe ngegwava, ipapaya, ipayina, kunye ne-lychee yongeza incasa). Njengoko ubeka imenyu yakho yomtshato, qiniseka ukuba usebenzise isicwangciso sakho ngokugqamisa oku kutya kwaselwandle, iziqhamo kunye nemifuno. Ukuba i-luau yinto yakho, musa ukutsiba ihagu ye-kalua-yinto ephambili.
Uthando lobomi bam ucaphula yena
iisuti zomtshato kumyeni ongumIndiya
iivesi zebhayibhile ezilungileyo zemitshato
ilokhwe yomtshato emfusa nebomvu
Iindawo ezili-10 eziphezulu ze-honeymoon ngo-2017